Duuliye hurdeysan oo la habaabiy diyaarad uu waday - BBC News Somali
Duuliye hurdeysan oo la habaabiy diyaarad uu waday
Image caption Diyaarada ayuu duuliyaha u kaxeeyay jiho qaldan
Mas'uuliyiinta badbaadada hawada ee dalka Australia ayaa sheegay in diyaarad yar ay garoonkii loogu tala galay iney ku dagto ka gudubtay masaafe dhan 50 kiiloo mitir, ka dib markii uu seexday duuliyihii diyaaradda.
Duuliyaha hurday ayaa ahaa qofka kaliya ee saarnaa diyaaradda oo 8-dii bishan Nofeembar ka tagtay magaalada Devonport kuna sii jeedday jasiiradda King Island ee gobolka Tasmania.
Dhacdadan oo jahwareer badan dhalisay ayaa waxaa baaritaan ku sameeyay waaxda gaadiidka iyo nabad galyada hawada ee dalka Australia.
Saraakiisha ayaan sheegin sida uu duuliyaha kusoo kacay inta uusan diyaaradda u dajinin si nabad ah.
Bayaan ay soo saartay waaxda gaadiidka hawada ayaa lagu yiri; "Intii uu duullimaadka socday, duuliyaha ayaa seexday, arrintaasna waxay sababtay in diyaaradda ay jasiiradda dusheeda ku duusho masaafe dhan 46 kiiloo mitir".
Khabiir dhinaca duulista hawada ah oo lagu magacaabo Neil Hansford ayaa sheegay in Australia ay leedahay sharciyo adag oo la xiriira daalka duuliyeyaasha.
"Ma jirto sabab adduunka oo dhan uu qof u qaadi karo mas'uuliyadda daalka la xiriira duullimaadka" ayuu ku yiri wareysi uu siiyay warbaahinta Australia.
Shirkadda diyaaradda leh oo lagu magacaabo Vortex Air ayaa boggeeda internet-ka ku sheegtay iney sameyso duullimaadyo qorsheysan, iyo safarro nasiino ah oo ay ku marto qeybaha kala duwan ee waddanka Australia.
Maamulka waaxda gaadiidka iyo nabad galyada duulista hawada ayaa sheegay iney wareysan doonaan duuliyahaas ka dibna ay macluumaadka ku saabsan arrintan shaacin doonaan sannadka soo socda.